Yiziphi izakhi ezidingekayo zomhlinzeki wesevisi we-SEO eliphezulu?
Ezweni lanamuhla lapho amawebhusayithi athatha khona izitolo namaphilisi, noma amafoni ahamba phambili ashintsha abasizi bezitolo, kudingeka sithole ibhizinisi lethu ku-inthanethi ukuze sithole imali. Into eyodwa efuna ukutshala izimali ukuthuthukiswa kwewebhusayithi. Esinye isici esibalulekile kakhulu ukukhuthazwa kwewebhusayithi. Ungakha indawo ekhangayo nekhwalithi engeke ibonakale kumakhasimende akho angahle. Kuyinto evamile kubanikazi bewebhu futhi isizathu esiyinhloko sokuthi kungani befuna abahlinzeki be-SEO. Kunezinketho eziningi ezitholakalayo ukuthi ungayithuthukisa kanjani isayithi lakho - ukukhokha ngokuchofoza ngakunye, ukuthumela ibhulogi, ukumaketha kwezokuxhumana nabantu nokunye okunye. Kodwa-ke, indlela enamandla kunazo zonke yokwenza isayithi lakho libonakale kuzinjini zokusesha ukuthuthukisa injini yokusesha. Ungakwazi ukwandisa isayithi lakho ngezindlela eziningana - ngokuqasha umhlinzeki wezinsizakalo ze-SEO eliphezulu noma ngokwenza i-SEO yakho endlini. Zombili lezi zihlukile zinezinzuzo nezingozi zabo. Kodwa-ke, owokugcina uyingozi ngoba kungabiza i-rankings kanye nedumela lakho lewebhu. Ngenxa yokungabi nolwazi nolwazi, ungalimaza izikhundla zakho zesayithi futhi uthole ngisho nezinhlawulo ezivela kuzinjini. Yingakho isihloko sokuqasha umhlinzeki wezinsizakalo we-SEO othembekile namuhla. Kulesi sihloko esifushane, ngizokunika amathiphu ukuthi ungathola kanjani inkampani enhle yokwenza ngcono ukuthola amasevisi angcono kakhulu we-SEO kwisayithi lakho.
Imibuzo oyidingayo ukubuza umhlinzeki wezinsizakalo ze-SEO
Ngenza uhlu lwemibuzo ye-TOP okudingeka ubuze ababonisi be-SEO ukuze bahlole ukufaneleka kwabo nokuthembeka. eminye imibuzo okufanele bakubuze yona futhi.
Unayo imibono engxenyeni yami yezobuchwepheshe?
Umhlinzeki wezinsiza ezinhle ze-SEO kufanele enze ukuhlaziywa okuphelele kwekhodi yakho yesayithi ukuthola noma yimaphi amaphutha avimbela isayithi lakho kusuka ku-Google TOP.
Yiziphi izinguquko ezizodingeka kwisayithi lami futhi kungani ngidinga?
Udinga ukuxoxa ngalokho okushiwo yi-on-ne-off-page okudingayo ukuze uthuthukise isikhundla sakho sesayithi. Ngaphezu kwalokho, ochwepheshe be-SEO kufanele bakuchaze ukuthi kungani udinga lolu shintsho nokuthi bangashintsha kanjani isimo sewebhu samanje. Ngokuvamile, ukulungiswa kwekhasi elidinga ukufaka ukufakwa okucashile kwemigomo yokusesha okuhlosiwe ezindaweni ezifanele ekhasini ngalinye lesayithi. Ukukhishwa kwekhasi elingaphandle, ngesikhathi sayo, kukhonza ukuthuthukisa igunya lakho lewebhusayithi emehlweni ezitsheni zokusesha. Phakathi nale nqubo, ochwepheshe be-SEO badinga ukususa izixhumanisi ezingekho zekhwalithi futhi bathuthukise imethadatha yakho yesayithi njengamathegi wetihloko kanye nezincazelo ze-meta.
Uthola kanjani izixhumanisi kuwebhusayithi?
Ngaphambi kokuqala ukusebenza nomhlinzeki wezinsizakalo ze-SEO, udinga ukuhlola ubuningi kanye nekhwalithi yezixhumanisi le nhlangano ingakunika. Izinkampani ezisebenzayo ze-SEO zinenani lemithombo lapho zingakwazi ukuxhumana khona namakhasimende abo. Lemithombo kufanele ibe negunya futhi ihambisane newebhusayithi ethile yekhasimende. Kufanele abe nephrofayili yokuxhumanisa ehambisana nokuhlanganisa okushicilela izihloko ezibandakanyekayo ngokuphathelene nebhizinisi lakho kuzizinda eziholayo, okuthunyelwe kwezihambeli kumapulatifomu e-intanethi afanelekile, izinkampani ezikhokhelwayo zamahhala nezakhokhiwe, izingosi zendawo nokunye.Qinisekisa ukuthi umnikezeli wakho wezinsizakalo ze-SEO akenzi izindlela zokwakha izixhumanisi ezimnyama ezifana nokuthenga isixhumanisi njengoba ukungazi kwakho kungakudla isikhundla sakho ku-SERP Source .